Wax Walbo Oo Aad U Baahantahay in Aad Ka Ogaato Weerarkii Kismaayo | Xaqiiqonews
WARARKAWax Walbo Oo Aad U Baahantahay in Aad Ka...
Wax Walbo Oo Aad U Baahantahay in Aad Ka Ogaato Weerarkii Kismaayo
Dagaalyahanno aad uhubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa galay gudaha Hoteelka Cascaseey ka dib qarax weyn oo ka dhacay afaafka hore, maalintii labaad ayuuna galay weerarka.
18 saac ka dib, ciidanka Jubbland ayaa ku dhawaaqay in soo afjareen weerarka waxaana ay baahiyeen sawirada Barxadda hoteelka oo uu ka muuqdo burbur culus, hase yeeshee wariyaal ka tirsan Alshabaab o la hadlay idaacadda Andulus ee ku hadasha afka Alshabaab ayaa sheegay in uu wili socdo waxa ay ugu yeereen “Howlgal inqimaasi ah” kaasi oo ah kii ugu darnaa ee Kismaayo ka dhaca sida ay Alshabaab sheegeen.
Dadkii Ku dhintay Weerarka.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah Ajaanib u kala dhashay dalalka kala ah;
3 Qof oo Kenyan ah , qof u dhashay Kanada, qof ka soo jeeda Britain, labo qof oo Ameerikaan ah, seddex qof oo Tanzanian ah , iyo labo qof oo dhaawac ah oo u dhashay Shiinaha.
Inta kale waa dad Soomaali oo isuga jira siyaasiin iyo dad caan ah oo ay ka mid yihiin, gabadha caanka ka ah Baraha bulshada ee Hodan Naaleeye oo iyada heysata dhalashada Kanada, Seygeeda Jaamaca Fariid oo xil wasiir ka soo qabtay maamulka Puntland, sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah Wariye Ka tirsan SBC TV oo lagu magacaabi jiray Maxamed Salaad, iyo dad kale oo badan oo ay ku jiraan dad xilil ka qabtay ama doonayey in ay ka qabtaan maamulka Jubbland.
Maalmo Ka hor Weerarka.
Kismaayo ayaa weerarka ka hor la ciirciireysay wafuud kala duwan kuwaasi oo buux dhaafiyey Hoteelada Magaalada, waxaana jiray khilaaf xoogan oo ka taagna habka doorashooyinka Jubbland, waxaana la xasuustaa in maalmo ka hor Kismaayo laga dejiyey hub sida la sheegay Ay leedahay DF-ka .
Yaa Daganaa Hoteel Madiina (Ex Cacaseey)?
Hoteel Cascaseey, oo sidoo kale hadda loo yaqaan Hotel Madiina, waxaa uu intii dambaba hoy u ahaa siyaasiinta Mucaaradka ee ka soo horjeeda Maamulka Jubbland, waxaana dadka goobta ku dhintay ka mid ahaa musharaxiin u taagan Xilka maamulka Jubbland, taasi oo calaamad su’aal weyn saareysa cidda fududeysay weerarka.